जनतापाटी आइतवार, जेठ १२, २०७६, १२:१५:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सामान्य त हाम्रो समाजले पुरुष र महिलाबीच हुने बैवाहिक सम्बन्ध पछि मात्रै शारिरीक रुपमा परिवर्तन हुने तथ्य स्विकार गर्छ ।तर कतिपय महिला र पूरुषहरु हर्मोन र वंशाणुगत गूणको कारण पनि शारिरीक रुपमा परिवर्तन हुने गर्दछन् ।
विहेअघिको शारिरीक परिवर्तनलाई शंकाको रुपमा लिन नहुने चिकित्सकहरु बताउछन् । मानिसको जीवनमा यौन सम्पर्क अपरिहार्य नभएपनि आवश्य चाँहि हो । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ ? उनीहरुको हिप किन फुल्छ ?
धेरै केटाहरूलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ र जान्ने इच्छा हुन्छ । के कुराले गर्दा महिलाको शारीरिक स्वरूप मा परिवर्तन आउँछ रु एक सर्वेले यसको बारेमा पत्ता लगाएको छ ।
यो पनि थाहा भयो कि जुन महिलाको कम्मर पातलो हुन्छ उनिहरु बच्चालाई सजिलै जन्म दिन सक्छन् । जसको हिप ठुलो छ उनिहरुलाइ गर्भवती हुदा खासै समस्या नहुने बताइएको थियो । (एजेन्सी)
कक्षा ११ को परीक्षा सुरु, परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल प्रयोगमा निषेध आइतवार, बैशाख २९, २०७६, ०७:१६:००
‘विप्लव समूह’लाई वार्तामा ल्याउनुपर्छ' सोमवार, जेठ १३, २०७६, २२:४१:००
शेयर बजार : सामान्य बिन्दुले कमी बिहिवार, मंसिर ६, २०७५, १६:५६:००